Coronavirus: Maxay tahay faa’idada adduunka uu ka dhaxlay? – Xeernews24
Coronavirus: Maxay tahay faa’idada adduunka uu ka dhaxlay?
24. März 2020 /in Qormooyin/Articles /von admin
Heerka wasakheynta hawada ayaa hoos u dhacday guud ahaan caalamka tan iyo markii uu dunida ku faafay xanuunka corona.
Isbadelkan ayaa la sheegay in aad looga dareemay dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Talyaaniga oo uu aad u saameeyay fayraska corona.
Cilmibaareyaal ku sugan Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay in qaaca hawada ku baxa ee laga sii daayo gadiidka kala duwan iyo warshadaha uu hoos u dhacay boqolkiiba konton.
Arrintan ayaa loo sababeynayaa tallaabooyinka ay qaadeen dalal dhowr ah oo ay kaga hortagayeen faafidda coronavirus.
Waxaa bandow lagu soo rogay dalal badan oo caalamka ah oo uu ka dilaacay xanuunka, waxaana taasi ay keentay in dadka aysan kaxeynin baabuurta oo qaaca ay sii deyn jireen uu yaraaday, waxaana albaabada la isugu dhufto warshado badan oo caalamka kuwaas oo uumiga ay hawada kusii deyn jireen ay aad u yaraatay, maadaama aysan dad badan shaqo tagin.
Sidoo kale shirkado badan oo ah kuwa duulimaadyada ayaa hakiyay duulimaadyadii ay sameyn jireen, waxaana taasi ay yareysay wasakheynta ay diyaaradahaas hawada ku sameyn jireen.
Sida ay qortay jariiradda arrimaha cimilada ee Carbon brief, waxaa dunida oo dhan laga dareemay hoos u dhac dhanka tamarta ah oo gaaraya boqolkiiba 25, taas oo ka dhigan in gaadiidka kala duwan sida baabuurta, maraakiibta, warshadaha, diyaaradaha iyo tareennada aysan shaqeynin coronavirus awgii.
Dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga ayaa ah wadamada ugu badan ee laga dareemay hoos u dhaca waxyaabaha wasakheeya hawada, maadaama labadaasi ay yihiin kuwa uu aadka u saameeyay fayraska corona, ayna gaartay in bandow lagu soo rogo.
Warshado badan oo ku yaalay gobolka Hubei ee dalka Shiinaha ayaa la xiray, waxaana taasi ay keentay in uu aad u yaraado qiiqa wasaqeysan ee ay kusii deyn jireen hawada.
Waxaa sidoo kale sare u kacay helitaanka „hawa tayo leh“ ee dalka Shiinaha, oo ay dadku ku noolaan karaan, waxaana ku darsamay 21.5 boqolkiiba, taas oo ka duwan heerkii ay joogtay sanadkii hore.
Sidoo kale sawiro dayax gacmeed lagu qaaday oo ay soo bandhigeen hey’adaha saadaasha hawada ee Mareykanka iyo Yurub ayaa muujinaya in hoos u dhac aad u badan uu ku yimid uumiga ka baxa gaadiidka iyo warshadaha dalka Shiinaha iyo dalal kale oo badan.
„Waa markii iigu horeysay oo aan arko hoos u dhac intan la eg,“ ayuu yiri Fei Liu oo ah cilmi-baare katirsan hey’adda NASA ee dalka Mareykanka.
Wargeyska The Financial Times ayaa sidoo kale kusoo warramay in diyaarado gaaraya 80 kun ay joojiyeen duulimaadyadii ay sameyn jireen, oo micnaheedu tahay in qaacii ay hawada kusii deyn jireen uu meesha ka baxay.
Diyaaradaha caalamiga ah ee joojiyay duullimaadyada waxaa ka mid ah, Emirates, Delta, Qantas, Lufthansa iyo kuwa kale oo badan oo yareeyay safarada sida KQ, British Airway iyo kuwo kale.
Inkastoo aanan marnaba la inkiri karin saameynta dhaqaale, midda caafimmaad ee uu xanuunka ku reebay dunida, haddana waxaa muuqata in tallaabooyinkii la qaaday ee la doonayay in looga hortago xanuunka ay ka dhasheen faaidooyin aanan marnaba lagu fikirin, sanadihii dambena ay adkeyd in la arko.
Waxaa sanadihii dambe aad isu soo tarayay walaaca laga muujinaya isbadelka cimilada oo khubarada arrimaha deegaanka ay sheegeen in haddii aanan wax laga qabanin saameynta ka dhalata la dareemi doonaa.
Dad badan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa aaminsan in loo baahan yahay in sida dadka bani’aadamka ay uga taxadareen noolashooda iyo caafimmaadkooda si lamid ah loogu baahan yahay in loo ilaaliyo cimmilada, waxna laga qabto isbadelka cimilada.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2020/03/Addunka.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2020-03-24 10:35:022020-03-24 10:35:02Coronavirus: Maxay tahay faa'idada adduunka uu ka dhaxlay?
Xogta Dahsoon Cudurka Dilaaga ah oo soo afjaray Ilbaxnimadii Yuhuuda iyo Ma... Seynisyahan Soomaaliya oo uu ku dhacay Caabuqa Coronavirus!!!!